Video: Berlin Ah Police Le Mipi Karlak Faktuk In Buainak A Chuak – Chin 11 News
Video: Berlin Ah Police Le Mipi Karlak Faktuk In Buainak A Chuak
Minak pa GF thih hnu ah US ramchung vialte ah buainakachuak I minung thong tamtuk nih lamzawh nak an ngei hna. Atu ah cun US ramchung lawng hmanh si ti loin Germany khualipi Berlin zong ah buainak fak ngai inachuak cang.
US ramchung ah hnahnawk ngai in an au pi mi Black Lives Matter lamzawh nak cu kan nih zong kan dirpi hna tiah nizan ah khan Berlin khualipi chung Alexanderplatz hrawng ah minung 15,000 hrawng nih lamzawh nak an ngei hna. Lamzawh nak an thok hi chunhnu suimilam2hrawng ahasi caah police nih an rak kham lem rih hna lo I an duhning paoh in an rak cawlcang kho.
Cu hnu suimilam pakhat aluan hrawng ah cun Alexanderplatz metro station pawngkam ah miphun thleiden nak kong ah cun minung an rak tamtuk hringhran cang caah police pawl nih an chuah hnawh hna hiasi. Cu hmun ah cun police le lamzawh sahdahpiah mi hna karlak ah faktuk in buainakachuah zong hiasi.
Lamzawh sandah piah mi hna nih police an motor zong an denpiak ve hna acozah he apehtlai mi thil paoh hrawh an I thok ve cang. Cu ruang ah police an tleih hna I an tuk ve hna. Mipi nih bottle (palang dur) tlakrawh le an hmuh mi thil phun kip in an rak cheh ve hna caah thawngzamh tupa pakhat zong amah hngal lo tiang in hliamatuar phah. Cu lamzawh nak ah ai tel mi hna chung in minung 93 zong an thlak cang hna.
ဘာလင် ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ရဲနဲ့ ဆန္ဒပြသူများ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား
ဘာလင် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဆန္ဒပြသူတွေအကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွား —အကုန်သိ သတင်းဌာန— လူမည်း အမျိူးသား ဂျော့ဖလွိုက်သေဆုံးမှုအပေါ် အမေရိကန်တစ်ဝန်း ဆန္ဒပြမှုတွေကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့လယ်မှာ စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကာ လူ ၁၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ အမေရိကန်တစ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Black Lives Matter ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ တသားတည်းရပ်တည်ကြောင်းပြသမှုအဖြစ် စနေနေ့ က ဘာလင်မြို့လယ် Alexanderplatz ရင်ပြင်ဆီ လူ ၁၅၀၀၀ ခန့်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ဆန္ဒပြပွဲဟာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး အတားအဆီး အဟန့် အတားမရှိခဲ့ဘဲ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ jazz ဂီတတွေ သီဆိုတီးမှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်နာရီလောက်အကြာမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးဆန္ဒပြမှု အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီး Alexanderplatz မီးရထား ဘူတာဝန်းကျင် ဧရိယာမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဆန့် ကျင်ဝါဒီ ဆန္ဒပြသူ ရာပေါင်းများစွာနဲ့ ပြည့်နှက်လာချိန်မှာ ရဲတွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုပါတယ်။ ရဲကားကို နှောင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားသူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုပါတယ်။ လူအုပ်ထဲကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပုလင်းတွေ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့် ရဲတစ်ဦးနဲ့ ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ယခုဖြစ်စဉ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံရသူ ၉၃ ဦးရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ RT (Unicode)ဘာလငျ ခြီတကျဆန်ဒပွပှဲအတှငျး ရဲတပျဖှဲ့နှငျ့ ဆန်ဒပွသူတှအေကွား ရုနျးရငျးဆနျခတျ တိုကျခိုကျမှုတှေ ဖွဈပှား —အကုနျသိ သတငျးဌာန— လူမညျး အမြိူးသား ဂြော့ဖလှိုကျသဆေုံးမှုအပျေါ အမရေိကနျတဈဝနျး ဆန်ဒပွမှုတှကေို ထောကျခံတဲ့အနနေဲ့ ဂြာမနီနိုငျငံ ဘာလငျမွို့လယျမှာ စုဝေးဆန်ဒပွခဲ့ကွပွီး ဆန်ဒပွသူတှနေဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေး တပျဖှဲ့ဝငျတှအေကွား ရုနျးရငျးဆနျခတျ တိုကျခိုကျမှုတှေ ပျေါပေါကျခဲ့ကာ လူ ၁၀၀ နီးပါး ဖမျးဆီးခံလိုကျရပါတယျ။ အမရေိကနျတဈဝနျး ဖွဈပျေါနတေဲ့ Black Lives Matter ဆန်ဒပွပှဲတှနေဲ့ တသားတညျးရပျတညျကွောငျးပွသမှုအဖွဈ စနနေကေ့ ဘာလငျမွို့လယျ Alexanderplatz ရငျပွငျဆီ လူ ၁၅၀၀၀ ခနျ့ ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ အဓိက ဆန်ဒပွပှဲဟာ မှနျးလှဲ ၂ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာ စတငျခဲ့ပွီး အတားအဆီး အဟနျ့အတားမရှိခဲ့ဘဲ ဆန်ဒပွသူတှဟော jazz ဂီတတှေ သီဆိုတီးမှုတျခဲ့ကွပါတယျ။ နောကျတဈနာရီလောကျအကွာမှာတော့ ငွိမျးခမျြးစှာ စုဝေးဆန်ဒပွမှု အဆုံးသတျသှားခဲ့ပွီး Alexanderplatz မီးရထား ဘူတာဝနျးကငျြ ဧရိယာမှာ လူမြိုးရေးခှဲခွားမှု ဆနျ့ကငျြဝါဒီ ဆန်ဒပွသူ ရာပေါငျးမြားစှာနဲ့ ပွညျ့နှကျလာခြိနျမှာ ရဲတှနေဲ့ ဆန်ဒပွသူတှအေကွား ရုနျးရငျးဆနျခတျတိုကျခိုကျမှုတှေ ဖွဈခဲ့တယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့က ပွောဆိုပါတယျ။ ရဲကားကို နှောငျ့ယှကျတိုကျခိုကျဖို့ ကွိုးစားသူတဈဦးကို ဖမျးဆီးဖို့ကွိုးစားခဲ့ရာမှ ရုနျးရငျးဆနျခတျမှုတှေ စတငျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး အာဏာပိုငျတှကေ ပွောဆိုပါတယျ။ လူအုပျထဲကနေ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို ပုလငျးတှေ၊ ကြောကျခဲတှနေဲ့ပဈပေါကျခဲ့တာကွောငျ့ ရဲတဈဦးနဲ့ ဓါတျပုံသတငျးထောကျတဈဦး ဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ ယခုဖွဈစဉျအတှငျး ဖမျးဆီးခံရသူ ၉၃ ဦးရှိခဲ့ကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။ RT
Posted by AKonThi on Sunday, June 7, 2020